नेटवर्क समय प्रोटोकल (एनटीपी)
के हो नेटवर्क समय प्रोटोकल (एनटीपी)?वास्तवमा, यो एउटा प्रोटोकल प्रोटोकॉल हो जुन प्याकेट स्विच गरिएको नेटवर्कमा कम्प्युटिङ प्रणालीहरू बीचको घडीहरू सिंक्रोनाइज गर्दछ। यो मध्य-1980s को वरिपरि भएको छ र डेलावेयर विश्वविद्यालय मा डेविड मिल्स द्वारा बनाईएको थियो; यो इन्टरनेटमा अझै पनि सबै भन्दा सिमेन्ट गरिएको प्रोटोकॉल मध्ये एक हो। एनटीपी लाभार्थीको आदर वा स्थगित भएको मिल जानकारी नेटवर्क को रन फेला को विविधता गर्न acclimating संग समय स्रोत वा समय सर्भर को क्षेत्र को दृश्य मा समय परिवर्तन गर्न केही क्षमता छैन भनेर अन्य समय समिकरण नवाचारै supplanted।
30 वर्ष अघि यसको परिचय पछि एनटीपीले विभिन्न परिवर्तनहरू गरेको छ। एनटीपी अनुकूलन0को सितम्बर को 958 मा RFC 1985 मा विशेषता थियो। एनटीपीटीएक्सएनएमएक्सले धेरै मिलिसेकेण्डमा समय परिशुद्धता पूरा गर्न सक्थे।0मा, RFC 1988 ले NTPv1059 को विशेषता बनायो, जसले ग्राहक सर्भर र साझा मोडको लागि एनटीपी ट्यूनिंगको विशेषता बनायो। 1 मा, RFC 1989 एक व्यवस्थापन प्रोटोकल र एक पुष्टि योजना, रूपमा अझै आजको भेद को एक भाग रूपमा उपयोग जुन जस्तै कुराहरू समावेश जो NTPv1119, विशेषता। RFC 2, जुन 1305 मा फर्काइयो, एनटीपीटीएक्सएनएनएमएमएक्स विशेषता। एनटीपीटीएक्सएनएमएमएक्सले अतिरिक्त ब्लड खोज्न र परीक्षा समावेश गरेको छ, जसले ग्राहकलाई विभिन्न टाई स्रोतहरू बीच छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। सञ्चार मोडको साथै सञ्जाल बहु-नेटवर्कमा समयको प्रसारण सुविधालाई सहयोग गर्न परिचित भएको थियो। 1992 मा, आरएफसी3एनटीपीवीएक्सएनएमएक्सका लागि विवरणमा वितरित गरिएको थियो तथापि RFC3द्वारा 2010 को मार्च मा अपग्रेड गरिएको थियो। NTPv5905 एनटीपी को वर्तमान अनुकूलन हो। यसले NTPv4 को एक समान घटक को एकदम माप राख्छ तर आईपीवीएक्सएनएमएक्स को लागि ब्लेस्टर मूल नेटवर्क प्रोटोकल को रूप मा शामिल छ। प्रमाणीकरणलाई थप सुधार गरिएको छ र प्रोटोकॉल अधिक प्रमुख सुरक्षा दिन्छ।
एनटीपी को समय स्रोत को विभिन्न स्तर को व्यवस्था को उपयोग गर्दछ। प्रगतिशील प्रणालीको प्रत्येक स्तर स्ट्रिटको रूपमा चिनिन्छ र शून्य (0) सँग सुरुवात सांख्यिक सम्मान मानिएको छ। जब तपाईं समय, स्रोतहरू र स्ट्रटममा उच्च स्रोतमा सिङ्क्रोनाइज गर्नुहुन्छ (संख्यात्मक सम्मानमा तल ल्याउनुहोस्), तपाईले 1 लाई यसको स्ट्रिट सम्मानमा थप्नुहोस्। हामी स्ट्रटम सम्मान को समय स्रोत को विश्वास स्तर को रूप मा उपयोग गर्न सक्छन्। जेरो सबै भन्दा भरोसेमंद छ, र 15 न्यूनतम प्रयोगनीय स्तरमा रहेको एक विश्वसनीय स्तर हो। 16 को एक strumum अन्यक्रोनाइज गरिएको छ र पागल हुन भनिएको छ। स्तर 16 स्ट्रैटम ग्याजेट पर्याप्त समय स्रोत होइन। NTP लाई सामान्य रूपमा समन्वय गरिएको सार्वभौमिक समयमा समय पठाउँदछ (अन्यथा विश्वव्यापी समय समन्वित वा यूटीसी भनिन्छ)। नजिकैको समय सर्भर वा ग्राहक ग्याजेटमा पड़ोसी समयको लागि परिवर्तन सम्भव छ।
एक उद्यम को लागि एनटीपी को मानक पठाई एक विश्वसनीय स्रोत देखि स्रोत समय हो, उदाहरण को लागि, एक प्रशासन समय स्रोत। संयुक्त राज्यमा, मानक र टेक्नोलॉजीको नेशनल इंस्टीट्यूटले कहिलेकाहीँ सर्वरमा सिंक्रोनाइज गर्न सक्दछ। Tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi मा, तपाइँ समय समय सर्भरहरू, तिनीहरूको क्षेत्रहरू र आईपी स्थानहरू एक समय सर्भर संकेत गर्न खोज्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ पन्त समय समय सर्भर र स्ट्रैटम बढ्ने समय छान्नुभयो, त्यसपछि तपाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ कि यो प्रयास सञ्जाल भित्र समय स्रोतको रूपमा। स्विचहरू र स्विचहरू (सिस्को र अरू) त्यसपछि तपाईंको नजिकको समय सर्भरबाट समय खिच्न सक्नुहुन्छ, र पछि तिनीहरू तिनीहरूका अघिको ग्याजेटहरूबाट समय स्रोत हुन उत्प्रेरित गर्न सक्दछ। सबैभन्दा ठूलो काम गर्ने प्रणालीहरूले एनटीपी विन्डोज सहित बन्धक बनाउनेछन्। विन्डोज 2000 पछि विन्डोजको सबै संस्करणहरूसँग Windows समय सेवा (W32 टिम) भएको छ NTP प्रयोग समयको समक्रमण।
आजको सञ्जालमा, समय मिलिसेकेण्ड वा धेरै मिलिसेन्ड भित्रको सिंक्रोनाइज गरिएको हुन सक्छ, किन किन? त्यो निर्भर गर्दछ! यसले अनुप्रयोगहरू र समयका लागि तिनीहरूको आवश्यकताहरूमाथि निर्भर गर्दछ। यो एक "समझदार" घडी हुन सक्छ कि इमेल कहिलेकाँही थाहा पाउन र थप रूपमा प्राप्त गर्न पर्याप्त हुन सक्छ। मौलिक क्षमताहरूमा समय स्ट्याम्पहरू जुन मिलिसेकेन्ड भित्र 10 हरूको लागि सही हुन सक्छ। अनुप्रयोगहरू ठूलो सम्झौता थप समय छुट्याउन सक्दछ। एक अन्वेषण परिप्रेक्ष्यबाट, मिलिसेकेण्ड भित्र एक टाइम स्ट्याम्प गर्न नेटवर्क भित्रका मुद्दाहरू निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मूल्य आधारित अनुप्रयोगहरू विचार गर्नुहोस्। एक खाता वा अन्य बजेट विनिमय आदान प्रदान गर्न को लागी एक समझदार घडी हटस्पट भन्दा अधिक हुनु एक अनावश्यक आवश्यकता हो। मुख्य आवेदन को एक एनटीपी उपयोग गर्न उड्डयन अख्तियार लागि थियो, र नियमित ग्राहक रूपमा, म उत्पादन र उपकरण उडान हाम्रो विमानहरु ट्रयाक कि मिलिसेकेन्ड भित्र समतल छ भन्ने महसुस गर्न खुसी छु। यसले ती विमानहरूलाई विमानको क्षेत्रको रूपमा र अरूलाई निकटताको रूपमा एकदम राम्रो सुधारिएको सोच्नलाई उडान गर्न अनुमति दिन्छ।
NTP एक प्रोटोकल हो जुन 30 वर्ष भन्दा बढीको लागि वरिपरि रहेको छ र अझै पनि आवश्यक छ। घडीहरू पछाडी साधारण लागिसकेको छ, र हामी सकारात्मक समयमै भरोसा गर्छौं। आज एनटीपी संग, हामी एक समझदार समय स्रोत भन्दा बढि र मिलिसकेन्ड स्तरको परिशुद्धता प्राप्त गर्न सक्दछौं। यस अवसरमा तपाईले यो भन्दा बढी केहि आवश्यक पर्दछ, प्रेसिजन समय प्रोटोकल (पीटीपी) हेर्नुहोस् ... तथापि त्यो अर्को पोस्टको लागि हो।
5 सामान्य प्रोग्रामिंग मिथकहरुलाई एक्सपोजिङ